Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fahatongavan'i HBO Max any Espana | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 09/09/2021 13:07 | Sarimihetsika sy andian-tantara, an-trano
HBO Efa teo an-tsena ny famoahana ireo mpamatsy atiny audiovisual nandritra ny fotoana ela, indrindra ny fanolorana ny mari-bola tadiaviny indrindra. Na izany aza, misy antony maro mahatonga ny mpampiasa handositra ny serivisy any Espana noho ny kalitaon'ny sary ambany sy ny fampiharana ratsy azy, zavatra izay ho lasa tantara ihany amin'ny farany.
HBO dia manambara ny fahatongavan'ny serivisy HBO Max any Espana, asehonay anao ny atiny rehetra sy ny fanovana tokony hataonao mba hankafizanao ny serivisy. Jereo miaraka aminay ny fomba ahazoana tombony betsaka avy amin'ny HBO Max ary araraoty tsara ny sehatra amin'ny alàlan'ny torolàlana azo antoka.
1 HBO Max sy ny fahatongavany tany Espana
2 Ary ahoana ny amin'ny famandrihako HBO ankehitriny?
3 Ny fanovana sy ny vidiny eo amin'ny sehatra HBO Max
4 Inona no ho katalaogin'i HBO Max any Espana?
HBO Max sy ny fahatongavany tany Espana
Ny serivisy HBO Max dia nampiasaina nandritra ny fotoana ela tany amin'ny firenen-kafa toa an'i Etazonia ary noho izany dia efa ananan'izy ireo ny tranokalanao any Espana. Araka ny nambaran'ny HBO tenany, ny serivisy dia manome anao ny tantara tsara indrindra avy Warner Bros., HBO, Max Originals, DC Comics, Cartoon Network ary maro hafa, miaraka amin'ny voalohany (farafaharatsiny any Espana). Zavatra izay tsy isalasalana fa hiteraka fisalasalana amin'ireo mpampiasa sasany, saingy aza manahy, satria tonga hamaha ny fisalasalana rehetra mety hitranga izahay.
Miomàna ho tia ny sehatra streaming vaovao izay hipetraka any Espana amin'ny 26 Oktobra #HelloHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
- HBO Spain (@HBO_ES) Septambra 8, 2021
Ny zavatra voalohany dia tokony hazava tsara fa amin'ny fotony 26 Oktobra ho avy dia afaka mankafy ny HBO mahazatra ianao toy ny sisa amin'ny famokarana WarnerMedia ary mandefa amin'ny sehatra tokana nefa tsy mila fifanarahana serivisy samihafa amin'ny alàlan'ny mpamatsy fahitalavitra nentim-paharazana toa an'i Movistar, ankoatry ny hafa.
HBO Max dia ho tonga any Espana, Suède, Danemark, Norvezy, Failandy ary Andorra amin'ity 26 Oktobra ity. Aorian'izay dia hitohy any Portiogaly ny fanitarana, ankoatry ny firenena hafa, na dia mbola tsy voamarina aza ireo daty ireo.
Ary ahoana ny amin'ny famandrihako HBO ankehitriny?
Raha fintinina, tena tsy hisy zavatra hitranga. HBO dia hanome vanim-potoana fampifanarahana, fa raha ny tena izy, ny zavatra hataon'izy ireo dia manjavona ilay sehatra HBO nentim-paharazana, izay azo antoka fa maro no tsy hahita fahafinaretana, ary hampidirina ho azy ny angona HBO Max. Midika izany fa:
Azonao atao ny miditra ao amin'ny HBO Max amin'ny alalàn'ny HBO (mpampiasa sy teny miafinao)
Hotehirizina, hotehirizina ny tahirin-kevitra ary haverina averina ao amin'ny toerana nilaozanao azy ny atiny
Raha fintinina, io kaonty 26 Oktobra io ihany dia hivadika ho kaonty HBO Max ny kaonty HBO anao ary afaka mankafy ny atiny rehetra atolotry ny sehatra vaovao ianao.
Ny fanovana sy ny vidiny eo amin'ny sehatra HBO Max
Ny HBO dia tsy nanamafy na hisy fiovana amin'ny vidiny ampiasain'ny mpampiasa, raha ny marina, rehefa nafindra ny serivisy HBO mankany HBO Max any Etazonia sy any LATAM dia tsy nisy fiakaran'ny vidiny.
Raha ny marina, rehefa dinihina ny HBO dia efa nanamafy fa mandeha ho azy tanteraka ny famindrana kaonty sy ny fampahalalana. Ny zava-drehetra dia manondro fa tsy hisy fiovana amin'ny famandrihana. Ary koa, raha manararaotra ny HBO ianao amin'ny alàlan'ny tolotra atolotry ny orinasan-telefaonanao na ny mpanome tolotra Internet anao, dia tsy hisy hiova satria ny antontan-taratasinao dia hitohy hatrany amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa.
Inona no ho katalaogin'i HBO Max any Espana?
Araka ny fantatrao, ny HBO dia ao amin'ny Warner, noho izany, afaka mankafy an'io katalaogera HBO io izahay Cartoon Network, TBS, TNT, Swym olon-dehibe, The CW, DC Universe ary ny Movies an'ny orinasa sy ireo orinasam-pamokarana mifandray aminy toa ny New Line Cinema. Tsy isalasalana fa hitombo habe sy kalitao ny katalaogna:
Ny blockbusters lehibe indrindra, ny tantara mamaky tany, ary ny kilasika tsy hay hadinoina izay nahatonga antsika ho iza. Ny zava-drehetra ao amin'ny HBO Max.
Famoahana farany an'i Warner: Space Jam: New Legends
Ho fanampin'izay, manana andiana zon'olombelona toa ny Friends, The Big Bang Theory na South Park izy ireo hanatsarana bebe kokoa ny katalaogy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Sarimihetsika sy andian-tantara » Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fahatongavan'i HBO Max any Espana
RoboVac X80 sy HomeVac H30, filokana vaovao avy amin'ny eufy